Gelbiskii Geeridda Qaybta 5aad Cabdiqaadir Dayib Askar University of York, UK www.abdikadiraskar.com | Warsugan News
Home Maqaalo Gelbiskii Geeridda Qaybta 5aad Cabdiqaadir Dayib Askar University of York, UK www.abdikadiraskar.com
Gelbiskii Geeridda Qaybta 5aad Cabdiqaadir Dayib Askar University of York, UK www.abdikadiraskar.com
Dec 28, 2017Maqaalo
aalin Axad ah oo aan daawanayey filin cusub oo maalmahaas soo baxay ‘Taken 3’ ayaan ku war helay sawaxan badan oo daaradda gurigayga ka baxayey. Shaadhkaygii baan la booday dabadeedna si dhakhso leh dabaqii hoose ugu daadegay.
Waa ciidan aad u tiro badan oo hor-tuman gurigayga. Waxa sheedda iiga muuqanayey walaalkay Abshir oo katiinadaysan, dhinac gaadhigii askartana loo sii wado. Kor ayaan u qayliyey aniga oo ku ordaya dhinacii loo sii waday. Bal se iima ay suurtogelin in aan gaadho waxaana i joojiyey Taliyihii ciidanka. Wuxu iga codsaday in aan ku soo booqdo Saldhiga Qaybta 3aad, ee Eglinton.
Deg-deg ayaan ugu anba-baxay dhankii saldhigga, waa se la ii oggolaan waayey in aan helo faahfaahin la xidhiidha xidhitaanka walaalkay Abshir. Waxa se xan ku maqlay in walaalkay iyo koox kale oo Nayjeeriyaaniyiin ah Maxkamadda la geynayo, loonna haysto kiis xasaasi ah.
Maalintaas uu Abshir maxkamada joogay aad ayuu ilmaynayey, ciil badan baana ku gadhoodhsanaa. Foolkiisa waxa laga akhrisanayey qoomamo iyo welbahaar. Hooyaday oo i ag fadhiday qudheeda ilmo ayaa dhabanadeda qoysay. Dhammaantayo dareenkayga wuu kacasanaa anagga oo ka xun dhibaatada xoriyad la’aaneed ee walaalkayo la soo daristay.
Abshir waxa u bilaabamay nolol xabsi oo adag. Da’diisa oo yarayd awgeedna, waxa ay u ahayd xaalad kale oo kelinimo iyo rafaad wadata. Annaga waxa ay noo ahayd wehel la’aan kale oo na soo food-saartey.
Muddaddii koobnayd ee Abshir xidhnaa, waxa isbedel weyni ku dhacay muuqaalkiisii duleed. Wuxu noqday nin dhillan oo timahiisii madoobaa ay soo taraxday cirro madaxiisa qabsatay. Indhahu wey goteen, dibnahiisuna way qar- qarxeen ilaa diirku ka dhacay debintiisa hoose. Jidhkiisu guud ahaan, wuu tamar darnaaday. Waxa aanu cuntadii xabsiga ka qaaday xannuunka gaas-calooleedka.
Previous PostGelbiskii Geeridda Qaybta 6aad Cabdiqaadir Dayib Askar University of York, UK www.abdikadiraskar.com Next PostGelbiskii Geeridda Qaybta 4aad Cabdiqaadir Dayib Askar University of York, UK www.abdikadiraskar.com